Tsika Logistic Center Service & Mugadziri | Hengli Metal Kugadziriswa
Yedu Logistic Center yakavambwa mukupera kwegore ra2014, vangangoita makumi mashanu evashandi, vachishandisa ERP ruzivo rwetekinoroji uye barcode manejimendi kuve nechokwadi cheiyo zvigadzirwa zvekuchengetedza.
Automated inventory masystem anoshanda nekutarisa barcode pane izvo zvikamu. A barcode scanner inoshandiswa kuverenga barcode, uye ruzivo rwakanyorwa nebarcode runoverengwa nemuchina. Ruzivo urwu runoteverwa nepakati computer system. Semuenzaniso, odha yekutenga inogona kuve nerunyorwa rwezvinhu zvinofanirwa kudhonzwa kurongedza nekutakura. Iyo yekutsvagisa yekutevera system inogona kushandira akasiyana siyana mashandiro mune ino kesi. Inogona kubatsira mushandi kuwana izvo zvinhu pane irondedzero irimo mudura, inogona encode yekutumira ruzivo senge nhamba dzekutevera uye kero dzekuendesa, uye inogona kubvisa izvi zvakatengwa zvinhu kubva kune yekuverengera tally kuti uchengetedze chaiyo kuverenga yezviri-muzvinhu zvinhu.
Yese iyi data inoshanda tandem kupa mabhizinesi neicho chaicho-chenguva yekutsvaga ruzivo Inventory manejimendi masisitimu anoita kuti zvive nyore kuwana uye kuongorora ruzivo rwekuverenga mune chaiyo-nguva neyakareruka dhatabhesi yekutsvaga uye chinhu chakakosha kune chero bhizinesi rinotamisa kugoverwa kwezvinhu.
ERP system inovandudza mashandiro (uye nekudaro purofiti) kuburikidza nekuvandudza mashandisiro eHengli zviwanikwa, kunyangwe izvo zviwanikwa ingori nguva, mari, vashandi kana chimwewo chinhu. Bhizinesi redu rine maitiro uye ekuchengetera maitiro, saka iyo ERP software inokwanisa kubatanidza iwo mashandiro kuti zvirinani kuteedzera nekutarisira zvinhu.
Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuona kuti huwandu hwakawanda sei hunowanikwa, ndezvipi zvinhu zviri kubuda zvekutumira, ndezvipi zvinyorwa zviri kuuya zvinobva kune vatengesi uye nezvimwe.
Kunyatso tarisa nekutevera maitiro aya kunobatsira kuchengetedza bhizinesi kubva pakupererwa nesitoko, kutadza kuendesa pamwe nezvimwe zvinogona kuitika.
Pashure: Cnc machine basa
Zvadaro: Plasma & Flame Kucheka Service